Ukuphononongwa kunye namaNqaku eMicimbi yobuGcisa nguNeil Gaiman - Ikkaro
yokuqalisa >> Iincwadi >> Uphengululo kunye neNqaku >> Imicimbi yobugcisa nguNeil Gaiman
Uhlelo lokuhlela lweDestino luhle kakhulu. Yeyengqokelela yeAncora kunye neDelfín. Yincwadi ekhawulezayo ukuyifunda, ungayifunda ngeyure enye, kodwa inomdla kakhulu. Ezinye iincwadi, ezikhawulezayo ukufunda, zintle kakhulu kwaye zilungele ukunika njengezipho esithethe ngazo Ithaca kunye kunye Khanyisa umlilo.
Ukuba unomdla ungayithenga apha.
Ngokukodwa, kukho iitekisi ezi-4:
Kutheni ikamva lethu lixhomekeke kumathala eencwadi, ukufunda nasekucabangeni.
Ukudibanisa njani isitulo.
Yenza ubugcisa obuhle.
Yapapashwa okokuqala ngo-2015 ngu New Statesman
Kukho iingxelo ezili-9 ngohlobo lweNkolelo. Zonke ziqala ngemveli Creo… Ukukhusela inkululeko, ngakumbi yokuthetha. Ilungelo lokucinga, ukuba nemibono kunye nokuyivakalisa. Ukuthetha ngawo nawuphi na umcimbi ukukhubekisa nokungahoyi.
Ndiyakholelwa ekubeni ungazichasa ezakho izimvo kwabanye ongazithandiyo, ukuba ubenenkululeko yokuxoxa, ucacise, ucacise, uxoxe, ukhubekise, uthuke, unomsindo, uhlekise, ucule, wenze umdlalo weqonga kwaye uphike nantoni na oyifunayo.
Ibanga ngaphezu kwayo yonke inkululeko yokuthetha kwimeko yezehlo ezinxulumene ne-Islam.
Yapapashwa okokuqala ngo-2013 ngo UkuLamaAgency.org.uk
Sisibongozo sokubaluleka kokufunda, iincwadi ezibonakalayo kunye neelayibrari. Soloko ukhusela ukufunda, hayi kuphela ukufunda kodwa ukonwaba, funda intsomi yolonwabo.
Ngentsomi, uvelwano lwenziwa
Le yingongoma endingakhange ndiyicinge. Ngaba ubuxoki bunokuvelisa uvelwano? Kufanelekile ukubonakaliswa.
Amathala eencwadi amalunga nenkululeko. Inkululeko yokufunda, inkululeko yezimvo, inkululeko yonxibelelwano. Zinxulumene nemfundo, ukuzonwabisa, ukudala iindawo ezikhuselekileyo kunye nokufikelela kulwazi.
Ngokuhamba ngoku, sinomsebenzi wokukhusela amathala eencwadi. Abantu abaninzi bazijonga njengenkcitho nje engenamsebenzi. Ukuba ayinangeniso. Ukujonga inzuzo yelayibrari eyinkonzo yoluntu ayinangqondo. Ukusebenza kwayo kwezoqoqosho akunakulinganiswa.
Sinoxanduva lokufundela ukonwaba. Ukuba abanye bayasibona sifunda, sibonisa ukuba ukufunda kuyinto elungileyo. Sinoxanduva lokuxhasa amathala eencwadi, ukuthetha ngokuchasene nokuvalwa kwawo.
Ukuba asiwaxabisi, siyawavala umlomo amazwi exesha elidlulileyo kwaye sonakalisa ikamva.
Ukudibanisa njani isitulo
Ukuvela okokuqala ngo-2011 kwi-CD ye Ngorhatya kunye noNeil Gaiman kunye noAmanda Palmer
Khange andixelele okuninzi.
Ndifuna ukuqonda ukuba uthetha ngokuntsonkotha kunye nokuchaneka xa ebhala ibali okanye incwadi, eyithelekisa nesikweko sokuhlanganisa isitulo.
Kwaye ukuza kuthi ga ngoku uhlalutyo olukhulu.
Yenza ubugcisa obuhle
Yapapashwa okokuqala ngo-2012 ngo UArts.edu
Isicatshulwa esineenxalenye ezimbini ezahlukileyo. Eyokuqala kukuphononongwa kobomi bakhe kunye nezigqibo kunye neenjongo awazenzayo ukuba abe ngumbhali.
Thetha nge-impostor syndrome, ukusilela, impumelelo kunye nendlela yokujongana nazo. Kuba zombini zizisa iingxaki ezihambelana nazo.
Kwaye eyona ngxaki inkulu ngempumelelo kukuba ilizwe liyila iyelenqe lokukuyekisa ukwenza into oyenzayo, kuba uyaphumelela.
Ngenye imini kwafika xa ndijonga phezulu ndabona ukuba ndingumntu owona msebenzi wakhe yayikukuphendula i-imeyile kwaye wabhala njengeyona nto ndiyithandayo
Kwaye iyasikhuthaza ukuba silandele iinjongo zethu kwaye sonwabe.
Kubonakala ngathi kuyathethwa kum ngendawo eqinisekisa ukuba yonke imisebenzi ayenzileyo ngenxa yemali ayilunganga. Nangona i-idyllic ngandlela ithile, andicingi ukuba oku kungadluliselwa kwabanye abantu behlabathi.
Inxalenye yesibini uthetha ngobugcisa kunye nokubaluleka kokwenza ubugcisa.
Unesakhono sokwenza ubugcisa
Ngalo naluphi na uqeqesho, sinokwenza ubugcisa. Kwaye ndicinga ukuba wonke umntu kufuneka ayenze, nokuba ayizukuba yindlela yethu yobomi, nokuba "yinto oyithandayo", kufuneka sonke siziqhelanise nemisebenzi enxulumene nobugcisa. Ukupeyinta, ukuzoba, ukukrola, ukubhala, ukufota, njl.
UGaiman usinika ubugcisa, njengesisombululo kwiingxaki zobomi bethu, ekusebenzeni, kwiingxaki zomtshato okanye kwizibini, kwiingxaki zentlalo, njl.
Yenza umdla, ongakholekiyo, ozukileyo kunye neempazamo ezintle. Yaphula imithetho. Yenza umhlaba ube yindawo enomdla ngakumbi ngokuba kuyo. YENZA UBUGCISA OBULUNGILEYO
Kwaye usikhuthaza ukuba senze ubugcisa bethu, singazivumeli ukuba sihanjiswe kwaye siphenjelelwe ngabantu. Ukwenza ngendlela yethu, ngeyona ndlela ifanelekileyo siyaziyo ukuba ikho njani kwaye ngokokubona kwethu. Ukwenza uyilo, ukwenza izinto ezintsha. Umhobe wenkululeko yokucinga kunye nemisebenzi yobugcisa ngaphandle koxinzelelo kwaye ngaphandle kwezikhokelo.
2 Kutheni ikamva lethu lixhomekeke kumathala eencwadi, ukufunda nasekucabangeni.
3 Ukudibanisa njani isitulo
4 Yenza ubugcisa obuhle
5 Ifoto yegalari